गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने तिलोत्तमाको निर्णय
तिलोत्तमा, मंसिर ६ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नगर कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकले अस्पताललाई वडा नं. ४ स्थित दश नम्बरमा रहेको दश विगाहा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गौतमबुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, बुटवलले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई यहीँ मंसिर ३ गते मुटु अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिन पत्र दिएको थियो । विगत पाँच वर्षदेखि बुटवल—१० रामनगरमा भाडाका घरहरुमा सञ्चालन भैरहेको अस्पताल आफ्नै भवन निर्माणका लागि उपर्युक्त जग्गाको खोजीमा छ ।
अस्पतालले तिलोत्तमा नगरपालिकासँग १२ विगाह जग्गा प्राप्तिको लागि प्रस्ताव गरेकोमा कार्यपालिका बैठकले वडा नं. ४ को कित्ता नम्बर ६४ को सार्वजनिक जग्गा आठ बिगाहा पाँच कठ्ठा १९ धुर र त्यससँग जोडिएको नदी उकास क्षेत्रसमेत गरी दश बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सिफारिस गरिएको जग्गाको सन्दर्भमा वडा कार्यालयले सम्बन्धित वडाका बासिन्दाहरुसँग छलफल गरेको थियो भने कार्यपालिका सदस्यहरुसँग अस्पताल सञ्चालक समितिले अन्तरक्रिया समेत गरेको थियो ।
भवन निर्माणको लागि यसअघि बुटवल—१० रामनगरमा रहेको वनको जग्गा प्रस्ताव गरे पनि जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ भएपछि अस्पतालले तिलोत्तमाको विकल्प रोजेको हो । मुटु तथा मृगौला रोगको उपचार गर्दै आएको अस्पतालले जग्गा प्राप्तिसँगै कम्तिमा ५० वर्षको दिर्घकालिन योजनाको साथ अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण गर्ने जनाएको छ ।
तिलोत्तमा नगर कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकले टोल विकास संस्था सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइने अनुदान रकम खर्च कार्यविधि र सामाजिक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै कार्यपालिका बैठकले शिक्षा समितिले गरेको कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन, बाल विकास केन्द्रका विद्यार्थीलाई समेत दिवा खाजा उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णयहरु अनुमोदन गरेको छ ।
नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारसँग सम्पुरक कोषबाट सञ्चालन हुने योजना माग गर्ने, संसद विकास कार्यक्रमद्धारा सञ्चालित योजनाका सन्दर्भमा पनि निर्णय गरेको छ ।